theZOMI: [mrsorcerer:37809] မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြမ်းဖက်အထိကရုဏ်း လက်သည် ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ
[mrsorcerer:37809] မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြမ်းဖက်အထိကရုဏ်း လက်သည် ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ
ဆဲချင်သလိုဆဲ မတတ်နိုင်တော့ပြီ အမှန်ကိုတော့ ရေးတော့မည်။
ဗိုလ်သန်းရွှေ ဗိုလ်မောင်အေးတို့မဆင်းခင်လေး ရှုပ်ထား ယုတ်ထားသမျှ ကျနော့ဆီ အရောက်ပေးပို့လာကြသော တပ်မတော် အရာရှိကလေးများကိုတော့ အားနာသည်။ သို့သော် အမှန်တရားအတွက် ကျနော် ဖေါ်ကောင်လုပ်ပေးတော့မည်။
ပြဿနာအစက အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျင်ဝက် မြန်မာပြည်သွားသော ကာလတွင် ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် တရုတ်တို့ ချေခြင်းလိမ်တော့သည်။
ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ တပ်မတော်က အကြွေးအလွန်ထူနေသောကြောင့် ထွက်ပေါက်ရှာရေး မဟာဗျူဟာခင်းခဲ့ကြသည်။ ဂျင်ဝက်၏ ချီးကျူးထောပနာပြုမှုအတွက် အမြတ်ထွက်အောင် ဘဘကြီး ဗိုလ်သန်းရွှေကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီး ရှေးမြန်မာအနာဂတ်အတွက် အကြေလည်ရှင်းပြပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ဂျင်ဝက်နှင့် နိုင်ငံတကာသို့ လက်ဆောင်ပါးလိုက်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ၂လခွဲတင်းတင်းလောက်လိုသော ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ဂျင်ဝက်အား ဗိုလ်သန်းရွှေက ၂ နာရီကြာမျှတွေ့ဆုံပြီး အသေးစိတ်ချပြကာ ၄င်းလိုချင်သော အခြေနေအား နားချသည်။ တဖက်မှလဲတရုတ်ပြည်နှင့် နားလည်မှုရအောင် Lion Share ဟုခေါ်သော စီမံကိန်းကြီးများဖြင့် မက်လုံးပေးထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာ ကြွေးမြည်အား တရုတ်မှ ဆပ်ပေးမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့မှုများဖြင့် တင်းကြပ်နေသော မြန်မာ စစ်အစိုးရက ဂျင်ဝက်ဆိုသော အမေရိကန်ဆီးနိတ်အမတ်အား ငါးစာလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ငါးပွက်အိုင်ကြီးထဲသို့ ပစ်ချခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အရူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ခဲ့ပြီးသော ဂျင်ဝက်က တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှ နိုင်ငံတော် အချုပ်အိမ်စံ တပင်တိုင် အတိုက်ခံသမားကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သွားတွေ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒေါသလျော့ဖို့နှင့် ဥာဏ်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် စဉ်းစားဖို့ ဂျင်ဝက်က တိုက်တွန်းသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥပဒေဘောင်အတွင်းထဲမှ နိုင်ငံရေးနှင့် မိမိယုံကြည်ချက်ကို လုပ်ကိုင်ရန် ဂျင်ဝက်က မေတ္တာရပ်ခံသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျင်ဝက်တို့ ဆွေးနွေးပွဲ အခြေတော်တော်မလှပဲ ရုတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။ (အမေရိကန်သံရုံးမှ ၄င်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့ ပေးပို့သော သတင်းအား ၀ီကီလိက ဖေါက်သယ် ပြန်ချခဲ့သည်)။
ဂျင်ဝက် ပြန်သွားသောအခါ တရုတ်သံရုံးမှ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးကောင်စီသို့ တရုတ်ပြည်မှ သံစာ တစောင် ပေးပို့သည်။ ၄င်းစာပါအရ ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် အခြားသော စစ်အရာရှိများ ဂျင်ဝက်နှင့် ဆွေးနွေးထားသောကိစ္စများအား အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်အဖြစ် တရုတ်က တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်သန်းရွှေလုပ်သမျှ ဘောလိုက်မနေသော မင်းအောင်လှိုင်(ယခု ကာချုပ်)မှ အားလုံးတရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများအတွက် လိုလေသေးမရှိ လုပ်ပေးသည်။ ထိုအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင် (ယခု ထောင်ဒဏ် ၁၅နှစ် သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်) က တရုတ်အား မိမိတို့၏ နိုင်ငံတကာ သံတမန်ကိစ္စများ အသိပေးတင်ပြရမည်မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေမှ မျက်မုန်းကျိုးသွားခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလတွင် ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်အား ၄င်း၏ အောက်လက် အရာရှိဖြစ်သူ ယခု အာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ညွန်ကြားမှုအောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်၇န် ဗိုလ်သန်းရွှေမှညွန်ကြားမှုအား လက်မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး ဆင်ခြေပေးထောက်ပြမိရာမှ ထောင်နန်းစံသူ အဖြစ်သို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရ၏။ အကြောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မြင်အောင်သည် တရုတ်ပြည်အား မြန်မာ အစိုးရမှ အလုံးစုံကြောက်ရွံ့ မှီခိုအားထားနေမှုအား တပ်မှူးများ၏ အစည်းဝေးအချို့တွင် မကြာခဏ ထောက်ပြလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တရုတ်ပြည်မှ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရစေရန်နှင့် မိမိအား အကာကွယ်ပေးရန် ဗိုလ်သန်းရွှေအပါဝင် စစ်ဝန်ကြီးများနှင့် တကွ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီများဖြင့် စက်တင်ဘာလ (ရ)ရက်နေခင်း ၁၀ နာရီတွင် စိတ်ကောက်တော်မူနေသော တရုတ်သမ္မတ ဟူချင်တောင်းနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ၄င်းပြုလုပ်ထားသော ဗျူဟာ များအား အသေးစိတ် တင်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် သတင်းဌာနများနှင့် သံတမန်ရပ်ကွက်များတွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်းကို သာ ကူညီဆောင်ရွက် လက်တွဲဖို့ရှိကြောင်း တင်ပြထားခဲ့သည်။ (China lauds 'friendly' Myanmar as junta leader arrives By Dan Martin (AFP) – Sep 7, 2010) ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သံတမန်များမှတဆင့် နိုင်ငံတကာသို့ သံချောင်းခေါက်ကာ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့၏ ရွှေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးပေးခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ကလည်း တရုတ်တို့ဘက်သို့ Lion Share အားလုံးအားပေးသည့် အနေဖြင့် မြစ်ဆုံရေကာတာနှင့် လက်ပံတောင်းစီမံကိန်းအပါဝင် စီမံကိန်းအကြီးစားပေါင်း ၁၂၄ ခု ပေးခဲ့သည်။ထို့အပြင် မြစ်ဆုံဒေသ လုံခြုံရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုဖြစ်သော ကချင်တိုင်းရင်းသားများအား အမြစ်လှန်ဖယ်ရှားရေးကိုပါ ၀န်ခံကတိပြုခဲ့သည်ကို သက်သေအထောက်ထားတိကျစွာ စာရေးသူထံတွင် လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကပင် တရုတ်တို့နှင့် သဘောတူခဲ့သော နှစ် ၅၀ ကြာ စာချုပ်ဖြင့် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ ရှည်လျားကွေးကောက်သော ဂစ်ပိုက်လိုင်းကြီး၏ လုံခြုံရေးသည် အလွန်အရေးပါသော အခြေနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားသည့်နောက် တရုတ်စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအား ထိကပါးရိကပါး အခြေနေသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သော မြစ်ဆုံရေကာတာ ဖြစ်သော အမြင့်ပေ ၄၅၈ ရှိပြီး အလျားပေ ၄၂၉၇ပေခွဲရှိသည့် ရေကာတာကြီးအား မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးမှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြရာမှ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေဖြင့် လူထု ယုံကြည်မှုအား ၄င်းမှ တည်ဆောက်ပြရန်အလို့ဌာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နေခင်း ၁၁ နာ၇ီတွင် ကြေငြာချုက်ထုတ်ခဲ့သည်ကို တရုတ်ပြည်အစိုးရ အထင်မမှားစေရန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အား တရုတ်ပြည်သို့ အောက်တိုဘာလ တွင် စေလွှတ်တောင်းပန်ခိုင်းကာ နှစ်သိမ့်မှုလုပ်ခဲ့ရ၏။
ထိုနောက် ရခိုင်ဒေသ မှ သွယ်တန်းမည်ဆောက်လုပ်နေသော ဂစ်ပိုက်လိုင်းကြီး၏ လုံခြုံရေးအတွက် အောက်လမ်းနည်းဖြင့် မသမာသော အစီမံများလုပ်ဆောင်ရန် အသေးစိတ်အစီစဉ်များအား တရုတ်သို့ တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်ဒေသအတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများအား စတင်အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန် ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းတို့ အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့် အစီစဉ်များ စတင်ခဲ့သည်။
ဦးအောင်သောင်းတို့ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး တမန်တော်ကြီးအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဂျွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ စစ်ဘက်မှ ကေအိုင်အေတို့ နေရာယူထားသော တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံ တည်ရှိရာသို့ သွားသော လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ရှားရန် တရုတ်ပြည်အစိုးရအား ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း ကေအိုင်အေနှင့် ၁၇ နှစ်ကြာချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အား စစ်ပွဲဖြင့် စတင်ပျက်ပြယ်စေခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်အား ပြန်လည်ငြိမ်းအေးရန် ကြံ့ဖွံ့နဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့ လုပ်လာကြသည်။ ထိုတာပိန် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် တရုတ်ပြည်မှ အင်ဂျင်နီယာ ၉၀ ရာနှုန်းဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် မီးလင်းရေးကို ဦးတည်ထားသော စက်ရုံဖြစ်သည့်အတွက် တရုတ်အစိုးရ၏ အထောက်ပံ့များ မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ နောက်တွင် ရှိနေကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အတိလင်း ရေးသားထောက်ပြထားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ၇က် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စစ်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခသည်အရေး နိုင်ငံတကာသို့ ပုတ်ပွလာသောအခါ ဦးအောင်သောင်း နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းဇော်နှင့် ယခု ဦးအောင်မင်းတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်ရန် ရွှေလီတွင် ကေအိုင်ကေ အကြီးကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြောင်းကို နိုင်ငံတကာသို့ လော်ဘီလုပ် ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နေ့ရက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှအမိန့်ဖြင့် ကချင်ဒေသ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအတွင်းရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များအား စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအား ရပ်တန့်ထားကြောင်း မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြပြီး နိုင်ငံတကာ စစ်ရေး အကဲခတ်များအား ဗြောင်လိမ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖားကန့်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ အပြင်းထန် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဆိုနိုင်သည်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မည်ဟု လေလုံးထွားခဲ့သော ၀န်ကြီးများ အရှက်ကွဲပြီး မြားဦးလှည့်လာသည်မှာ ရခိုင်ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြဿနာ စတင်ရန် ၀န်ကြီးလက်သည်အချို့ အာရုံစိုက်ခဲ့ရသော အကြောင်းရင်းခံတခု အခိုင်အမာ တင်ပြရသော် ရခိုင်ပြည်နယ်သားများ၏ အခွင့်ရေးအရ ခံစားပိုင်ခွင့်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် (ကျောက်ဖြူမြို့နယ်) ဒေါက်တာအေးမောင် (ရခိုင် အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဌ) နှင့် ဦးဘရှင်တို့ မှ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် နာစင်ရှိရာနေရာသို့ လူထုအစည်းဝေးခေါ်ယူကာ ရခိုင်ပြည်သူများအား ရခိုင်ပြည်မှ ထွက်ရှိသော သံယံဇာတများအတွက် ခံစားခွင့်ရှိကြောင်းကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် မည်သို့ ပြဌာန်းထားကြောင်းကို စုရုံးခွင့် ရရှိသော လူထု ၅၀၀ အား ပြောကြားခဲ့သည်က စလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
"We will make demands just for what we should get from our union and we hope all Arakanese people and our ethnic brothers with their kind hearts will support our move to strive for our regional development and hope the responsible authorities in all levels will do their best to meet our demands," he said.
He also said his party would be able to make known to the central government what local people are expecting from the Shwe Gas Project after holding public conferences in the region, although lawmakers from his party had not received any positive answers from the union ministers when they raised questions about the project last September, with the aim of softening the stance of the central government over the region's natural resources.
"No matter how the regional natural resources are being centralized in the 2008 constitution, we hope the government will consider the fact that every region or division needs to use its own resources for its development," he said.
The regional election commission granted permission on 27 December for the RNDP to hold the public conference, which is scheduled from5pm to 11 pm on 1 January at the clock-tower grounds in Kyaukpru. It was learned that only 500 people are allowed to take part in the conference, and six senior leaders of the party, including Dr. Aye Maung and U Ba Shin, the legislator from People's Parliament in Kyaukpru, will speak at the conference.
http://www.narinjara.com/main/index.php/colonial-era-explotation-should-be-avoid-dr-. တွင် ပြန်လည်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လွတ်ခါနီး အချိန်လေးမှာပင် အမေရိကန်အစိုးရမှ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး ၂ ကြိမ်နှင့် အာရှရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး တို့ ၁ကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ရသော အခြေနေအား ဗိုလ်သန်းရွှေတို့မှ ဖန်တီးကာ မက်လုံးပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်စုလွတ်လာသောအခါဝယ် လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဥပဒေလမ်းကြောင်းမှပင် လျောက်လှမ်းစေရန် သံတမန်ကြီးများကလဲ ပထမဦးဆုံး သံခင်း စတင်ရေးသယ်ယူလာသော ဂျင်ဝက်ကဲ့သို့ပင် အခင်းကျင်းအထောက်ပံ့များ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်ကို နေပြည်တော်မှ သဘောတော်ကျနေခဲ့ကြ၏။ ထိုကာလတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွသော အသွင်များသာ ရှေ့တန်းရောက်ရှိနေပြီး တိုင်းပြည်တခုလုံး အလွန်သာယာသော အခင်းအကျင်း ကြီးသဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျောက်နီမှော်ရွာသားများမှ ပြဿနာတစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ သက်ဆိုင်ရာ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုသာ မျှော်လင့်နေခဲ့သည်။ ၂၉ ရက်နေ့ မေလတွင် မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်သူများဟူ ယူဆရသူ ၃ဦးအား မောင်းတော ရဲစခန်း၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့် လာရောက်စစ်ဆေးကြောင်း သတင်းလွှင့်ပြီး ကျောက်နီမှော် ရယက ရုံးတွင်ပင် အကျဉ်းရုံးစစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ၄င်းနေရာတွင် စောင့်ကြည့်နေကြသော ရခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဒေါသအိုးကို ပိုပြီး ပေါက်ကွဲလာအောင် ဒုရဲမှူး လှအေးမောင်က ဖန်တီးပြခဲ့၏။ မေလ ၃၀ ရက်တွင် ရခိုင် အမျိုးသားများ မကျေနပ်သံကျယ်လောင်ပြီး အုံးထနေသောကြောင့် ကျောက်နီမှော် ရယကမှ ရဲသို့ အကြောင်းကြားကာ အဆိုပါတရားခံ ၃ ဦးအား လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားစေခဲ့ပြီး ရမ်းဗြဲရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်မှာ သမာရိုးကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ထိုအကွက်သည် ၀န်ကြီးအောင်သောင်းတို့၏ အကွက်ထဲသို့ ရောက်သွား၏၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီး ဦးလှမောင်တင်သည် ဦးအောင်သောင်း၏ ပေးတာယူ ကြွေးတာစားသော အခြွေရံဖြစ်နေခဲ့၏။ ဂျွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မူဆလင် ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးအား မူဆလင်များ၏ ရှေ့မှောက်မှာပင် တောင်ဂုတ် ကားဂိတ်တွင် အုံးအုံးကြွက်ကြွက် သတ်ဖြတ်ပြခဲ့သည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ သံသယကင်းဖွယ် အစိုးရ လက်သည်များ ပါဝင်ပတ်သက်နေ၏။ တောင်ကုတ် ကားဂိတ်တွင် နဆက အရာရှိ ၃ ဦးမှ ကားပေါ်တက်ကာ မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ကားပေါ်မှ အားလုံးဆင်းပေးရသည်။
ထိုနောက် မှတ်ပုံတင်များတဦးခြင်းစစ်ဆေးပြီး အဆိုပါ မူဆလင် ၁၀ဦးနှင့် အခြားရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၄ ဦးကိုသာ ကားပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ပြုပြီး ကားထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ တောင်ကုတ်ကားဂိတ်တွင် မြန်မာ အမျိုးသား ၆ဦးနှင့် ရခိုင်အမျိုးသမီး ၅ ဦးကျန်နေရစ်သည်။ မူဆလင် ၁၀ ဦးတွင် ပါလာသော လက်ကိုင်ဖုန်း ၃လုံးအား ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားမှု အထောက်ထား မခိုင်လုံဟု ဆိုကာ နဆကမှ သိမ်းယူထားလိုက်သည်။
တောင်ဂုတ် ကားဂိတ်မှ ကားစထွက်ပြီး ကိုက် ၃၀၀ လောက်မှာပင် ဆိုင်ကယ်စီးလူတအုပ်က ၄င်းကားအား တားဆီးပြီး ကားပေါ်တက်ကာ သတ်ဖြတ်နေသည်ကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော တောင်ကုတ် ကားဂိတ်မှ လှမ်းမြင်နေကြသော နဆက နှင့် ရဲဝန်ထမ်းများ တုပ်တုပ်မျှမလှုပ်လှမ်းကြည့်နေခဲ့ကြသည်ဟု တောင်ကုတ်ကားဂိတ်တွင် ဆင်းကျန်ရစ်ခြင်းခံရသော ခရီးသယ်က ဖေါက်သယ်ချပါသည်။ ၄င်းအမှုခင်းဖြစ်ပွားလာသည်နှင့် ပိုပြီး မီးတောက်ကြီးမားလာအောင်နေ့စဉ်ထုတ်အစိုးရ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ဂျွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်အရေးခင်းအား အသေးစိတ်ရေးသားဖေါ်ပြထားပေးပြီး မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသည့်အနေဖြင် ထပ်ပြီး ကြီးထွားအောင် သတင်းစာတွင် စကားလုံး အသုံးနှုန်းများအား ခက်ခက်ထန်ထန် လုပ်ပေးလိုက်ကြ၏။
ဂျွန်လ ၈ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီတွင် ရွှေဇာ ဗလီသို့ ၀တ်ပြုရန်သွားရောက်ကြသော မူဆလင်လူငယ်များအားလုံးနီးပါး ဒုတ် ဓါး လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ၄င်းဗလီကြီးအား စုရုံးသွားနေကြသည်ကို လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူနှင့် နဆက ၀န်ထမ်းများမှ ခွင့်ပြုခဲ့၏၊ အဆိုပါ နေခင်း ဗလီဝတ်ပြုပြီးသော နေခင်း ၁နာရီတွင် ဘန်ဂါလီမူဆလင်များသည် ၄င်းတိုပ ရွှေဇာ ဗလီမှ ထွက်လာသည်နှင့် မောင်းတောမြို့ရှိ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘာသာဝင်များအား မီးကုန်ယမ်းကုန် တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ညနေ ၄ နာရီအထိ လုံခြုံရေးများ ရပ်ကြည့်နေခဲ့သည်။ မောင်းတောမြို့၏ အချက်အခြာကျသော အဆောက်ဦးများ စားသောက်ဆိုင်များ နေအိမ်များ အပြင် ကမ္ဘောဇ ဘဏ်တို့ကိုပါ အားရပါးရ ဖျက်ဆီးခွင့်ပြုခဲ့သည်ကို arakanland.com တွင် တင်ပြထားသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များနှင့် Eleven Media Group တို့မှ ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအထောက်ထားများက သက်သေခံဖြစ်နေခဲ့သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့များတွင် ကြီးမားသော ရန်ပွဲများ ဆထက်တံပိုး ကြီးမားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ဂျွန်လ ၈ ရက်နှေ့ညမှ စတင်ကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး ပုဒ်မ ၁၄၄ အား တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ ထုတ်ပြကာ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်များအား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပထမဆုံး ထိုးသွင်းခဲ့၏။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အရေးခင်းမြင့်မားလာသောအခါ ရခိုင်တွင် ပွနေသော ဖယိုဖရဲဘ၀များအား နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများကြီးမားလာသောအခါ နေပြည်တော်မှ သမ္မတ အပါဝင် ၀န်ကြီးများမှ အကူညီပေးရေးအား ၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လ ၂၂ တွင် အိုအိုင်စီအား ပြည်တော်သွင်းရန် သဘောတူခဲ့ကြပြီး အိုအိုင်စီနှင့် စာချွန်လွှာ လက်မှတ်များရေးထိုးပြကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းပြည်အနှံ့ ဒေါသူပုန်ထအောင် စနက်တံ မီးတို့ပေးလိုက်ကြသည်။
ထိုနောက် မလေးရှားမှပေးပို့သော ရခိုင်ပြည်မှ ဒုက္ခသယ်များအတွက် ပေးပို့သော ပစ္စည်းထုတ်များတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသယ်များ၏ ဓါတ်ပုံများ ဖေါ်ပြထားသည် စတေကာများအား ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းတွင် ၂၀၁၂ ခု စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အကောက်ခွန်ဌာနမှ အောက်ခံ ကပ်သွင်းပေးပြီး၊ ရခိုင်ပြည်ဘက်သို့ ပို့ကာ ထိုအထုတ်ပိုးများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသယ်ပုံရိပ်များကပ်ထားကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများမှ စတင် ဖေါ်ထုတ်ပြသသော သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သည့် ပုံရိပ်အား ငပွလုပ်ခဲ့ကြ၏။ (သတင်း အရင်းမြစ်သည် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းမှ)
"We will be transporting it byacommercial vessel as requested by the Myanmar government, and the vessel is expected to leave next Wednesday.
"It will take four days to reach Yangon Port, and from there, it will take us two days by truck to reach Rakhine state," he said.
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ အထဲတွင် အတွေးခေါ် အားနည်းသော ၊ ဘာသာတရားအား တရားဟောဆရာ မော်လီဆပ်များမှ ပြောသောစကားများကိုသာယုံကြည်သော မြို့ပေါ်မှ မူဆလင်အချို့ နှင့် မြန်မာပြည်အားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျမှ ခိုးဝင်လာသော ယခုခေါ်ဆိုနေကြသော ရိုဟင်ဂျာများအဖို့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြန်မာပြည်မအတွင်း အများစုကိုးကွယ်ကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာအား လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆက်ဆံပြုမူနေထိုင်မှု မရှိကြသောကြောင့် အဆိုပါ ဘာသာနှစ်ခုအကြားတွင် ကသိကအောင့်လေးလုပ်ပေးလိုက်သည်နှင့် ယမ်းပုံမီးကျ ပေါက်ကွဲတတ်ကြောင်း ကြံ့ဖွတ်အမတ်များက သိကြလေသည်။
ဦးသိန်းစိန် (သမ္မတ) မှ တက်တက်လာခြင်း အပြောကောင်းကောင်း နွဲ့နွဲ့ကလေးဖြင့် ပြောချလာလိုက်သည်မှာ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရစကားလုံးမိန့်ခွန်းများအတွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ရှေ့နေကြီး ဦးသိန်းညွန့်မှ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လသည် နေပြည်တော်တွင်း အတွင်းကြိတ်ပုံး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသော အခြေနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေငြာပြီး ကာလမှပင် ဖြစ်ပွားလာသော ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးသည် ၄င်း အတွင်းရေးမှုး(၁) နအဖတွင် လုပ်ခဲ့သောကာလတွင် မြစ်ဆုံတည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်ပြည်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဒသမ ၆ ဘီလီယန် တန်ဘိုး ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကြားပွဲစားကြီးလုပ်ခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ အား မြက်မြက်ကလေး အိပ်ထဲ ထည့်လိုက်သည့်အပြင် စာချုပ်စတင်ချုပ်ဆိုသော အချိန်တွင် ဧည့်သည်ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ အား တရုတ်ပြည်တွင် ကောင်စစ်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူနေသော ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သားမက် ကို ပေးခဲ့သည့် အတွက် ပြန်လည် လျော်ပေးရမည့်အခြေနေသို့ ဆိုက်ရောက်လာ၏။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ သင်္ကြန်ပြီးသွားသော ကာလ အစိုးရရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောကာလတွင် ဒုသမ္မတ ၄င်း၏ ဒုသမ္မတ အစိုးရရုံးဆိုင်ရာ ရုံးခန်းသို့ မလာတော့ပဲ မေလဆန်းတွင် နုတ်ထွက်စာ ပေးပို့ခဲ့၏။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမှ သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်အား ခေါ်ယူကာ သြ၀ါဒပေးပြီး တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရှေ့တွင် အနှောက်ယှက်မရှိအောင် သယ်ဆောင်သွားရန်နှင့် လက်ရှိ တင်ရှိနေသော နိုင်ငံတကာအကြွေးများအား အကြေလည် အပြီးပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ဟု တာဝန် အပြီးပြတ်ယူခိုင်းသည်မှာ ဦးသိန်းစိန် ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်ပါမည်လော။
ဦးသိန်းစိန်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သင်္ကြန်အတက်နေ့ အမိန့်အား ရင်ဝယ်ပိုက်ခဲ့၏။ သို့သော် မေလ ၅ ရက်တွင် ရေးသားသော The Guardian က အတိကျ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားခဲ့သော်ငြား သမ္မတရုံးမှ စင်္ကာပူတွင် ဆေးသွားကုနေသယောင် တရားဝင်မဟုတ်ပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့လွင့်ခဲ့သည် ။ နောက်ပိုင်းမှ အတည်ပြုပေးခဲ့၏။
ဦးအောင်သောင်းတို့ စီစဉ်သော ရခိုင်အရေးခင်းကြီး ပွက်ပွက်ဆူနေသော ကာလတွင် ဦးသိန်းစိန် ငွေရှာရေးအတွက် အိုအိုင်စီဟုခေါ်သော အဖွဲ့ဝင် ၅၇ နိုင်ငံ အစ္စလမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အား ရုံးစိုက်ခွင့် ပေးရန် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးရေးအား စိုင်းပြင်းနေကြပြီး အိုအိုင်စီမှ ပထမ ထောက်ပံငွေ အမေ၇ိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ အတွက် လုံးပမ်းခဲ့ကြ၏။
၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Network Myanmar ၀က်ဆိုက်တွင် ဦးအောင်သောင်းတို့၏ ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်သိန်းလင်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ထားသော အင်တာဗျူးတခုအား တရုတ် သတင်းထောက်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် zhang zhe and Ye Weimin ဇောင်ဇီ နှင့် ယီဝေမင် တို့က အချိန်ကိုက် ဖွင့်ချပေးခဲ့သည်။။ ဂျူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်သည် တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီး နှင့် နောက်တကြိမ်သွားတွေ့ရပြန်၏။ တပ်ချုပ်ကြီးမှ "မင်းတို့ ရွှေ့ တာ အလွန်နှေးလွန်းလို့ အားလုံး သဘောထား ကွဲလွဲမယ့်ပုံမျိုးဖြစ်နေတာ" ဟု နောက်ဆုံး မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဦးသိန်းစ်ိန်မှာ တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီးဆီမှ ပြန်လာပြီး သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် တွင် အိုအိုင်စီ အဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ အပါဝင် တွေ့ဆုံပြီး ရန်ကုန်တွင် အိုအိုင်စီ ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ပေးရန် သဘောတူကြောင်း ပြောဆိုကာ ပထမအရစ် ထောက်ပံကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းအား ရယူလိုက်ကြသည်။ သို့သော် ထိုသတင်းအား မန္တလေး သံဃာထုအတွင်းသို့ ချက်ခြင်း ပို့လွတ်ခဲ့၏။ တဖက်မှလဲ ယူအန်မှ ဘီဂျေးနံဘီးယားနှင့် ကင်တာနားတို့ နှစ်ဦးစလုံးအား မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ခွင့်ပြုထားပြီး ယူအန်၏ အထောက်ပံ့များကိုလဲ ယူထားခဲ့သည်။ (RFA August 10, 2012) (နောက်ပိုင်းတွင် အိုအိုင်စီလက်သယ်လုပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုများအား သီးသန့်တင်ပြပေးပါမည်)။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၀န်ကြီးဌာန အပြောင်းလဲနှင့် အသစ်ခန့်အပ်မှုများဖြင့် ရခိုင်ဒေသအထိကရုဏ်းအား သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် အတော်မှားယွင်းပြီး တလွဲဗြောင်လိမ်နေသော ပြန်ကြားရေး ဌာနအတွက် နိုင်ငံတကာအားထပ်မံ လှည့်စားပြပြီး ပြန်ကြားရေး ဦးကျော်ဆန်း အား နေရာရွှေ့ကာ ၀န်ကြီးဌာနပြောင်းပေးပြီး ဆက်ကစားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ၂၀၁၂ခုနှစ်သည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့တခုလုံး နိုင်ငံတကာသို့ ခြေဆန့်သော ကာလဟုဆိုနိုင်ပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေအားပေးထားသော ဂတိအတိုင်း နိုင်ငံတကာ အကြွေးပေါင်းစုံ ပယ်ပျက်ရေး အသည်းအသန် အားထုတ်ကြသော ကာလကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ရခိုင်နယ်စပ်တွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား အကြီးအကျယ် တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေသော ကာလလည်းဖြစ်၏။ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာလဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန် ဒီစီတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအား ပယ်ဖျက်ပေးရန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟယ်လာရီကလင်တန်အား တောင်းဆိုနေခဲ့ပြီး New York Time နှင့် Washington Post သတင်းစာ၏ ၁၉ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အကြီးကျယ်ရေးသားတင်ထားသည်။ ထိုနောက် ဦးသိန်းစိန်တို့ ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံကျော် လျော်ပစ်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်း တည့်သွားကြပြီး ၄င်းငွေအားလုံး ပြန်ဆပ်စရာမလိုတော့ပဲ ယနေ့ ဦးပိုင်အိတ်ထဲသို့ လျောကနဲ ၀င်ရောက်လာခဲ့ရသည်။
WASHINGTON — Myanmar's opposition leader, Daw Aung San Suu Kyi, called for the lifting of American sanctions against her country on Tuesday, beginning an emotional visit to the United States that punctuated the remarkable shift in relations with Myanmar over the past year.
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်သောင်း နှင့် အကျိုးတူ အစုရှယ်ယာပါဝင်ထားသော လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း၏သားတို့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသည့် ဧရာရွှေဝါ ကုမ္မဏီ၊ ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော်မြို့နယ် ရှားခဲကြီး ကျေးရွာတွင် အင်းအလုပ်မားများ ဆန္ဒပြမှုများတွင် ကျုံပျော်အခြေစိုက် ခလရ ၃၆ လက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းမှ ၀ိုင်းရံပေးပြီး အထောင်ရဲစခန်းမှ ရဲများက ပစ်ခတ်ကာ အရပ်သား ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၅ ဦး သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဖြင့် ၄င်းတို့ အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုသည် တရားဥပဒေအထက်တွင် ရှိကြောင်း အောင်သောင်းနှင့် အောင်သက်မန်း တို့မှ ထုတ်ပြခဲ့သည်။
Sep 28, 2012 | Posted by: roboblogger
Full story: The Irrawaddy Newsmagazine
Two people were killed while two others were seriously injured when police opened fire intoacrowd in Shar Khae Gyi Village, Kyonepyaw Township, Pathain District, Irrawaddy Division, on Thursday evening.
စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီးဘရွှေ၏ သမီးနှင့် မြေးများမှ ရန်ကုန်မြို့ ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းတွင် ရှိသော ဗုဒ္ဒ ၀ိဟာရ မှန်ကျောင်းတော်၏ ရွှေသင်္ဃန်းကပ် ရေစက်ချပွဲတွင် ၄င်းတို့၏ဖခင် ကျမ်းမာစွာ ရှိပါကြောင်းအား သတင်းဌာနများသို့ တမင်တကာ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဆက်လက် ကြိုးကိုင်နေပါကြောင်းအား ဖေါ်ပြခြင်းတစ်မျိုးဟု သတင်းလောကသားတို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
တဖက်မှလဲ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တို့ အဖွဲ့သည် ကေအိုင်အေအား အပြီးပြတ်တိုက်ရန် ၀ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး မိုးဂုံးသို့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်တွင် သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေးဆွေးနွေးသယောင် သတင်းလွှင့်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့ဆွေးနွေးမှုများတွင် ကေအိုင်အေအား အထောက်ပံ့ပေးခြင်း လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ညှိနိုင်းခဲ့သော်လဲ ၀ဒေသခေါင်းဆောင်းများထံမှ မသေခြာမရေသော အဖြေသာရရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်း ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ကတိပြုကာ လက်ဗလာဖြင့် ပြန်ခဲ့ရ၏။
အောက်တိုဘာလတွင် အိုအင်စီမှ မြန်မာပြည်ထဲဝင်ရန် အပြင်ဆင်များလုပ်လာသောအခါ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မှ ရခိုင်ပြည်ဒေ သ၏ မကြေမချမ်းဖြစ်သံများအား နိုင်ငံတွင်းပြင် သတင်းသမားများအတွင် လွတ်လပ်စွာ ရိုက်နှိပ်ဖေါ်ပြခွင့်ပေးပြီး အိုအိုင်စီ ကန့်ကွက်ရေးအား စိုင်းပြင်းခွင့်ပြုကာ အောက်တိုဘာလ ၁၄၊ ၁၅ ရက် ၂၀၀၁၂ ခုနှစ် အကြီးကျယ် အိုအိုင်စီ ၀င်ရောက်မှုအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေသောပုံရိပ်များ နှင့် အနေထားအားထောက်ပြကာ အိုအိုင်စီအား ပြန်ဖယ်ထုတ်ပြသော ကစားကွက်ကို ခင်းခဲ့ကြ၏။
YANGON, Myanmar (AP) — Myanmar's government will not allow the Organization of Islamic Cooperation to openaliaison office after thousands of Buddhist monks and laypeople marched to protest. .The anti-OIC protests were held in four Myanmar cities, including Yangon, the country's largest city, where about 5,000 people participated. Some said they were marching to safeguard Buddhism.he plan.
သို့သော် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂါလီများမှ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် မင်းပြား မြို့နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေအိမ်များအား မီးတင်ရှို့မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရခိုင်အမျိုးသားတို့မှ ကာကွယ်ရေးအစီစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရာ ၆ ဦးသေဆုံပြီး ၃၄ ယောက် စစ်တွေဆေးရုံသို့ ပိုခဲ့ရပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရဟန်းပျိုများက ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကန့်ကွက်ရန် လမ်းပေါ်တက်လာကြသောအခါ အောက်တိုဘာ ၂၇ တွင် ဘင်္ဂလီများနေထိုင်သော ကျောက်ဖြူ ကမ်းနားရပ်ကွက်များအား စစ်တပ်ကပင် မီးတင်ရှို့ပေးပြီး ရခိုင်လူမျိုးများ သွားရောက်မီးရှို့ကြောင်း ဂျာနယ်အချို့တွင် ရေးသားခွင့်ပြုခဲ့၏။
ထိုသို့ဖြင့် ဘင်္ဂလီဘက်လှည့်လိုက် ရခိုင်ဘက်လှည့်လိုက် ဧရာဝတီတိုင်းဘက် ပြသနာလုပ်လိုက်နှင့် နောက်ဆုံး ကချင်ဒေသ စခန်းသိမ်းပွဲများ ဆင်နွှဲရန်ဦးအောင်မင်းတို့ ကာချုပ်နှင့် လက်ဝါးခြင်းရိုက်ကာ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင် လက်ပံတောင် မီးလောင်ဗုံး ဖေါက်ခွဲ ဖြိုခွင်း နှိမ်နှင်းပွဲကြီး ပြုလုပ်ပြပြီး သတင်းမီဒီယာအားလုံး လက်ပံတောင်း သို့ အားလုံး ဦးလှည့်သွားချိန်တွင် ကချင်ဒေသ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ပွဲကြီးနှင့် စစ်ပွဲကြီးအား အကြီးကျယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပနေတော့သည်။
သြဂုတ်လ ၃ ရက်ကနေ လက်ပံတောင်းဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာလေတော့ ဦးရွှေမန်း က ပုဒ်မ (၁၈) နှင့် ပုဒ်မ (၅၀၅) ခ ကို လွှတ်တော်မှာ ထပ်ပြီး သိသာမြင်သာဖို့ ထပ်မံအဆိုတင်သွင်းပြီး ပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဦးအောင်မင်းတို့ လက်ပံတောင်းသို့ ရောက်သွားသော ကာလမတိုင်ခင်တွင် စီမံကိန်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်းယူထားသော အရာများအား ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်သူ ပါဝင်သူ ဦးဆောင်သူတွေအားလုံးအား ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ဖမ်းဆီးကာ တရားရုံးတွင် အနည်းဆုံး ဒဏ်ငွေ ၁၀ သိန်းမှ သိန်း ၅၀ အထိ ချမှတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများသို့ လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားခိုင်းပြီး နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား မွဲပြာကျသွားအောင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုအား လွှတ်တော် ဥက္က ဦးရွှေမန်းနှင့် ငြိမ်းပွဲစားကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်မင်း ၏ အချိန်းချက်နှင့် နေပြည်တော်၏ ( … ) ရိပ်သာတွင် ည ၉ နာရီမှ ည ၁၁း ၃၀ ထိ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။
ထို့ကြောင့် လက်ပံတောင်း ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော ကိုအောင်စိုး ဒေါ်နော်အုံးလှတို့ မည်မျှ အာမခံကြေး ပေးဆောင်ရသည်ကို မေးမြန်းလျှင် အဖြေ ပိုရှင်းသွားပေလိမ့်မည်။ မြစ်ဆုံကိစ္စသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုးရှင်းပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပဲ ကစားကွက်တခုသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အနောက်အုပ်စုများ၏ သဘောကျမှုကို ပထမဆုံးရယူရန်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဆိုရှယ်လစ် နေ့စဉ်သတင်း ၀က်ဆိုက်က အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် လက်ပံတောင်းကတော့ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက်ခံရမည်ကို စိုးသောကြောင့် နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု (State of Terrorism) အား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အကာကွယ်ယူ ရှောင်ထွက်ခဲ့ကြသည်မှာ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ လိုလောက်မည်ဟု မထင်မိပါ။
The grievances of people involved in the Letpadaung protest are similar to those raised against the massive Chinese-funded Myitsone Dam hydro-electric project. The government suspended the dam in September 2011, not primarily to appease angry locals, but to sendasignal to the US and its allies that it was looking to move away from China and toward the West. The Obama administration, which been encouraging suchashift, responded withaseries of official visits, culminating in last month's trip by the US president.( http://www.wsw/en/artical/2012/12/03/bur-d03 နှင့်
Global Times | 2012-11-29 1:20:04
ဒီဇင်ဘာလ ရ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ရှေ့တန်းစခန်းနှင့် ကချင်ဒေသ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးရုံးချုပ်မှ အစီစဉ်ကြီးတခု အခိုင်မာချမှတ်လိုက်သော အစီစဉ်ကြီးတခု ကြောက်ခမန်းလိလိ ထွက်လာသည်။
အကြောင်းမှာ ကချင်ဒေသ စစ်ဆင်ရေးသည် ၁၉ လကျော်ရောက်လာပြီး မည်သည့် နယ်မြေတစ်ခုမှ အမိအရ သိမ်းယူနိုင်မှု မရှိပဲ ဖြစ်ရကာ လက်ပံတောင်းဖြိုခွင်းမှုတွင် ပါ အရှက်ဟက်တက်ကွဲရသောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ အတွင်း ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲများ အပြီးသတ် ဆင်နွှဲပြီး ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့အား ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့တွင် ကျင်းပမည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ၈၈ ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ မှ လိုင်ဇာတွင် ကေအိုင်အေ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်နှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ခြေလျှင်တပ်၊ အမြောက်တပ်နှင့် ဝေဟင် စစ်ဆင်ရေးတို့အား ပုံအောအသုံးပြုတိုက်ခိုက်စေပြီး ကချင်ဒေသ အမိရ ဆုပ်ကိုင်မိအောင် ကြိုးစားသော်ငြား မင်းအောင်လှိုင်တို့အဖို့ အချဉ်းနှီးဖြစ်ရပြီး နောက်ဆုံး နိုင်ငံတကာမှ ကျယ်လောင်သော စစ်ပွဲရပ်တန့်ရေး သတင်းများသာ လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံး စစ်ပွဲသတင်းများအား ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ချပေးသလောက်ကိုသာ ပြောခွင့်ရသော သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မှူးဇော် အား ( ပြည်တွင်းစစ်တွင် တိုက်လေယဉ်သုံးခွင့် မရှိကြောင်း သတင်းဌာန AFP) သို့ပြောဆိုမိရာမှ၊ ပြောရေးဆိုခွင့် ရာထူးမှ ပြန်ကြားရေးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၏ တောက်တိုမယ်ရ အကူအဖြစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
သို့သော် ကကချုပ်ရုံးမှ ၁၉ လကျော်ကြာ စစ်ပွဲအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၆၅ သန်းအား အသုံးပြုပြီးကြောင်း ပြေစာရှင်းတမ်းအား သမ္မတရုံးသို့ တင်သွင်းပေးလိုက်သည်။ အကြောင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆရာကြီး ဦးအောင်မင်းအား ထိုငွေအား ပြန်လည်ရှာပေးရန် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် ရာဇသံတခု ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ (နောင်တွင် ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ဦးအောင်မင်းတို့ နော်ဝေ၊ သြစတေးလျား နှင့် ဂျပန် ၊ အီးယူမှပေးသော ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်ပံ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ အကြောင်း ကျွန်တော် တင်ပြပါမည်။)
၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တပ်မတော်မှ စီစဉ်ပေးသော လွတ်လပ်ရေးနေ့အား အကျဉ်းရုံး စီစဉ်ပြီးနောက် ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက်နေ့မှ လက်ဂျားယန်ဒေသသို့ အကြီးအကျယ် ဗုံးကြဲ စစ်ဆင်ရေးစတော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သူမအနေဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ခံရလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပါဝင်ပတ်သက် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သောကြောင့် စာရေးသူမှ ကေအိုင်ကေသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ကေအိုင်အေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် တောင်းခံစာပေါင်း ၂၂ ခုအား ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလမှစပြီး ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက်နေ့အထိ ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အခိုင်မာဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် နောက်ဆုံး စစ်ရာဇသံတခု ထပ်မံထွက်လာသည် ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း စစ်ရာဇသံသည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မတိုင်ခင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် လိုင်ဇာကို အပြီးပြတ်သိမ်းရန် ဆိုထားသည်။ ပြည်ထောင်စုနေ့အား တောင်တန်းဒေသအတွက် လိုင်ဇာတွင် ကျင်းပမည့်အကြောင်း ထည့်သွင်းထားခဲ့၏။
ရှေ့တန်းမှ ရဲဘော်နှင့် အရာရှိများက ကကရုံးအား ဖေစုံမောင်စုံ တိုင်းထွာ ဆဲဆိုကြသည်ဟု ပေါ်တာအဖြစ် လိုက်ပါရသော ဗန်မော်မြို့သားတဦးမှ နောက်ပိုင်းတွင် သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဇန္န၀ါရီလ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မှ ဟာဝိုင်ယီ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) အား ထပ်မံခရီးစတင်သော နေ့သည် ကချင်တို့၏ ခါရာတောင်တန်းအား ဗုံးမိုး အကြီးမားဆုံး ရွာသွန်းဖြိုးခဲ့သောနေ့ဖြစ်သည့်အပြင် ခါရာတောင်တန်း ဗုံး ဟောင်ဝေဇာ အမြောက်လှိုင်းအောင်တွင် ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ ၃၆၈ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၂၁၄ ယောက် ဒဏ်ရာရသော အဖြေထွက်ခဲ့ပြီး ကချင်ဘက်မှ ၄၆ ယောက်ကျဆုံးကာ ၂၃၃ ယောက် လိုင်ဇာ ဆေးရုံရောက်သွားခဲ့၏။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာဝိုင်ယီမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကကကြည်းနှင့် နောက်ချန် လက်ပံတောင်းကော်မရှင်တို့ ရေးသားထားပြီးသော အစီရင်ခံစာအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ပြသခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အစီရင်ခံစာအား အသေချာပင်မဖတ်တော့ပဲ သဘောတူလက်ခံခဲ့သည်ဟု ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုး မှ ပြောသည်။ သို့သော် မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လက်ပံတောင်း အစီရင် ခံစာအား ပြန်လည်ဖတ်ရှုခဲ့ပြီး အချို့သော အချက်များအား ပြင်ဆင်လိုသော်လည်း သူမ လက်ခံပြီးသားမို့ ဆက်လက် ရှေ့မတိုးတော့ပဲ ထုတ်ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့၏။
သို့သော် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အကြီးအကျယ် စဉ်းစားရသော အခြေနေမှာ အစီရင်ခံစာပါအကြောင်းရာများ မဟုတ်ရပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ညီလာခံအတွက် လုံခြုံရေး တည်ငြိမ်ရေးနှင့် အထမြောက် အေးချမ်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အား ဦးစားပေး စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ဒီချုပ်ညီလာခံ ပြီးမှသာလျှင် လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ရန် နေပြည်တော်နှင့် တိုင်ပင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကို ဒီချုပ်မှ ငြင်းဆိုလျှင် ငြင်းဆိုသော သမိုင်းတရပ် ကျန်ရစ်ပေလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော လက်ပံတောင်းကော်မရှင်မှ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရန် လုံခြုံရေး ထောက်လှမ်းရေး အစီစဉ်များအား ရဲချုပ်မှ တင်သွင်းသော မတ်လ ၈ ရက် ၂၁၀၃ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ဂျာနယ်များသို့ပေးပို့ပြီး ကော်မရှင် ဥက္ကဌမှ မတ်လ ၁၃ ရက် ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးသောနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေးနေ့ဟု အတိုက်ခံတို့ဘက်မှ တောင်းဆိုထားသော နေ့တစ်နေ့အား ပျက်ပြယ်ရန် ဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးရွှေမန်း၊ ရဲချုပ် ကိုကိုအပြင် ဦးခင်ရီပါသော အစည်းဝေး မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းရုံးနေပြည်တော်ဝယ် ပြုလုပ်ကာ တမင်တကာ ချမှတ်ပြီး အကွက်ဆင်၍ လုပ်ခဲ့ကြ၏။
အနားယူသွားသော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး တွင် သမီး ၅ ယောက် သား ၃ ယောက် စုစုပေါင်း ၈ ယောက်ဖြစ်သည်။
သား ၃ ယောက်တွင် ၂ ယောက်သည် မဟာဘောဂ စီးပွားရေးသမားကြီးများဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူကတော့ ဘိုးတော်ရောဂါထကာ အင်းအစီရင် ယာတြာနှင့် အဂိရ ဖိုထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်လေ၏။ ၄င်း၏ အဂ္ဂိရ ဖိုထိုးသောဒေသများသည် ယခု နေပြည်တော် မတည်ကပင် သွားရောက်စခန်းဝင်လေ့ ရှိခဲ့သော လယ်ဝေး ပျဉ်းမနား၏ အနောက်ဘက် တောင်တန်း တောတန်းများတွင် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာလာခြင်းပင်လျှင် ဗိုလ်သန်းရွှေသားငယ်၏ ခေါင်းကိုင် ဘိုးတော် ဆရာမဲ (၉)မိုင်မှ ဓါတ်စီးခန်း ပြုလုပ်သည်။ ၄င်းတို့ ဘိုးတော် ဆရာ တပည့်နှစ်ယောက်လုံးက ဓါတ်စီးသောအချိန်တွင် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများနှင့် သူတို့၏ ကတော်များပါ တက်ရောက်မေးမြန်းကာ ယာတြာယူတတ်ကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် တိုင်းပြည်အား အမျိုးသမီး အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရန် မြင်ကြောင်း ဘိုးတော်မဲမှ ဟောကြားကာ ယာတြာချေကြရမည့် အပိုင်းပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာသည်။ မိန်းမ အုပ်ချုပ်မည်ဆိုသောကြောင့် မစာလုံး၏ ထိပ်စီးသို့မဟုတ် နောက်ပိတ်ဖြင့် ဆုံးသော မြို့ရွာများအား ရစ်ပူဇော်သကဲသို့ အထိကရုံးပြုလုပ်ပြီး နှိမ်နှင်းကွပ်ကဲရမည်ဟု ယာတြာပေးခဲ့သည်။ ထိုမြို့ရွာများအတွက် အထိကရုဏ်းများဖြစ်ပေါ်ရန် ဒီပဲယင်း လက်သံပြောင် ဦးအောင်သောင်းနှင့် ဦးကျော်ဆန်း ( ယခု သမ) ၀န်ကြီးတို့အား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မှ တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ဦးအောင်သောင်းတို့၏ နောက်လိုက် ဦးခင်ရီနှင့် ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့အပြင် အမာခံ ကြံ့ဖွတ်များ ၃၀ ကျော် ရှိပြီး ခရိုနီများပင် ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။(မှတ်ချက်) ဦးအောင်သိန်းလင်း ရန်ကုန်တိုင်းမြို့တော်ဝန် ကာလတွင် အလံပြောင်းလဲတင်သောနေ့တွင် စင်ကြယ်ဖိနပ် စီးနင်းကာ အလံတင်ကြောင်း အားလုံးသိပေလိမ့်မည်။ စင်ကြည်ဆိုသည်မှာ စုကြည်ဟု နံတူယူ ဆောင်ရွက်ကြောင်း သက်သေ အခိုင်မာ ရှိပါသည်။
ရခိုင်အရေးခင်း မပေါ်ပေါက်ခင်ကလေးမှာပင် ကျောက်နီမှော်ရွာမှ မသီတာထွေးမုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရသော ကာနှင့် တဆက်တည်းမှာပင် တရုတ်ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေးအတွက်နှင့် ယာတြာတို့အတွက်ပါ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ၁၀ဦးအား သတ်ဖြတ်လိုက်သောမြို့နယ်သည် မ နှင့်စသောမြို့ (၁)မောင်းတော ဖြစ်လေသည်။ထို့နောက် (၂)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မင်္ဂလာဈေးအား မီးရှို့ပြာချလိုက်သည်။ ထို့နောက်(၃) မော်လမြိုင် ဈေးကြီးအား မီးလောင် ပြချကြပြန်သည်။ ထို့နောက်(၄) မြစ်ကြီးနား မိုင်ဂျားယန်ကို ထိုးစစ်ပြုလုပ်သည်။
ထို့နောက်(၅) မန္တလေး တိုင်းတွင် တရုတ်တဦးက မြန်မာ အမျိုးသားတဦးအားလက်သီးနှင့် ထိုးကြိတ်သော ပြသနာ လုပ်ပြပြီး ထိန်းကွပ်ပြသသည်။ ထို့နောက် (၆)မုံရွာ လက်ပံတောင်း အရေးခင်း အစပျိုးရန် ဦးအောင်မင်းတို့မှ အကြောင်းမဲ့သွားရောက်က တရုတ်ကျေးဇူး ဆပ်ရမည်ဟု မီးစထိုးလိုက်သည်။ ထို့နောက်(၇) မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုရွာ အရေးအခင်း ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်(၈) မိတ္ထီလာမြို့ အထိကရုဏ်း ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် (၉) မလှိုင်မြို့တွင် နေခင်းကြောင်တောင် အကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထို့နောက်(၁၀) မင်းလှတွင် ထပ်မံအကြမ်းဖက်မှု လုပ်ကြပြန်သည်။ မင်းလှ အကြမ်းဖက်မှုပြီးမှသာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိန့်ခွန်း မတ်လ (၂၈)တွင် ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
မိတ္တီလာ အရေးခင်းအား ဖေါ်ပြရပါမူ ရွှေဆိုင်တဆိုင်မှ အရောင်းဝယ်ကြောင့် ပြသနာစဖြစ်သည်ဟု အကြမ်းဖျဉ်းနားလည်ကြသည်။ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ၄င်း မတ်လ ၂၀ ရက် နေ့ခင်း ၁၂ နာရီ ၂၀ တွင်မှာပင် သံဃာတော်တပါးအား ဓါးဖြင့်ခုတ်ကာ မီးရှို့ရန် လုပ်သော မူဆလင်ရပ်ကွက်တခုက ထပ်ဖြစ်လာသည်ဟု ဖေါ်ပြကြပြန်သည်။ ထိုနောက် တစတစ ရန်မီးကြီးထွားလာခဲ့ပြီး မိထ္တီလာ အထီးကရုဏ်း ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အမှန်တင်ပြရသော မိထ္တီလာမြို့သို့ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးသန်းရွှေ၏ ဒုတိယသမီး ရောက်ခဲ့သည်။ သူမ မိထ္တီလာသို့ ရောက်သော အချိန်သည် ည ၉ နာရီခန့်ရှိပြီး မိတ္ထီလာ တပ်မတော်သားများမှ အကြီးကအကျယ် လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ရပြီး မိထ္တီလာမြို့အား အသေခြာ ပတ်ပတ်လည် နှစ်ခေါက်တိတိ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု့သည်။ ဦးသန်းရွှေ၏ သမီးနှစ်က မိထ္တီလာမြို့၏ အချက်ခြာကျသော နေရာများအား လက်ညိုးထိုးပြသည်ဟု ဆိုသည်။ ၄င်းတို့တွင် ကြီးမားသော စီမံကိန်းကြီးတရပ် အကောင်ထည်ဖေါ်ရန် အစီစဉ်ရှိခဲ့ကြသည်။ မိတ္ထီလာ သည် မန္တလေးထက်ပင် အချက်ခြာကျသော နေရာဟု နေပြည်တော် စီပွားရေးသမား ခရိုနီများက သွားရည်ကျနေသည်မှာ ကြာလေပြီ၊ မိတ္ထီလာသည် မိုးအလွန်ခေါင်သော နေရာမျိုး မဟုတ်ပဲ စီးပွားရေးဇုန်ကြီးတခု အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ မိတ္ထီလာတွင် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးများ အခြေခြရာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် တပ်ရင်းများနှင့် ဆေးဘက် စစ်ပစ္စည်းဘက် ထောက်ပို့ရေး အပါဝင် တပ်ရင်းဌာနပေါင်း ၁၅ ခုရှိသောမြို့လဲဖြစ်ပြီး တပ်မတော် အရာရှိကြီးများအဖို့ စီးပွားရေး စစ်ရေး များအတွက်လဲ အလွန်အရေးပါကြောင်း မှတ်ချက်ချပြီး တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီး သမီးမှ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
၄င်းပြန်သွားပြီး နောက်မိတ္ထီလာသို့ စစ်အရာရှိကြီးများ မကြာခဏ သွားရောက်နေခဲ့ကြသည်။ မြို့လယ်ခေါင် နေရာကောင်းများအား ကုလားများကသာ နေရာယူထားကြောင်း ကောက်ချက်ချသည်။
၄င်းတို့ ကောက်ချက်ချပြီးမကြာမှီမှာပင် ဆရာတော် ၀ီရသူ၏ မူဆလင်ဘာသာဝင်များ မိတ္ထီလာတွင် မည်မျှနေရာယူထားကြောင်း တိုက်ရိုက်ထောက်ပြသော တရားပွဲ လွတ်လပ်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကပင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအပါဝင် ဦးအောင်သောင်းတို့နှင့် ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ခဲ့လေသော ဆရာတော် ဝေရသူ အား ၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပြီး ထိုနောက် ထောင်မှ လွတ်လာသော ဆရာတော်ဝီရသုအား ပထမဆုံး သွားရောက်တွေ့ဆုံသူနေပြည်တော် အကြီးကဲပိုင်းများထဲတွင် ဦးအောင်သောင်း ထို့နောက် ဦးခင်ညွန့်တို့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်း စဖြစ်သော အချိန်တွင် နယ်ထိန်း ဒုရဲအုပ် ၀င်းမောင်မှ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားသည်။ သို့သော် ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုက်မည် အခြေနေကိုသာ အသေးစိတ်စောင့်ကြည့်ရန် ညွန်ကြားသည်ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ ညနေရောက်လုလုတွင် ကြီးကြီးမားမား လူအုပ်ကြီးများဖြစ်လာခဲ့ပြီး မီးတင်ရှို့သော ဇာတ်လမ်းများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ၄င်းဒေသတွင်းမှ ရဲအင်အား ၁၅၀ ခန့် လက်နက်အပြည့်စုံဖြင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ပေးပြီး ၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက် မရှိကြတော့ပဲ ပိတ်မိသူက ပိတ်မိကာ သတ်ပွဲများ တစ်ညလုံးကျင်းပ နေခဲ့ကြသည်။
အာရုံဦးရောက်ခါနီးမှပင် အဆိုပါ အချက်အခြာကျသော နေရာများသည် ပြာကျကုန်သလောက်ဖြစ်သည့်အပြင် အချို့နေရာများတွင်ပင် ထပ်မံမီးတင်ရှို့နေသော အဖြစ်ပျက်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေလေသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်သည် အဘယ်ကြောင့် ဆက်တိုက်ဖြစ်ခွင့်ပေးထားသနည်းဟု စုံစမ်းသောအခါ ရဲများသည် မိတ္ထီလာ တပ်ချုပ်ကြီး၏ အမိန့်ကို စောင့်ဆိုင်းကိုင်တွယ်ရသည်ဟု ခိုင်လုံစွာ သတင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အထူးဆန်းဆုံး ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှာ မိတ္ထီလာတွင် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မာရှယ်လောကြေငြာပြီးနောက် အခြားမြို့များသို့ ဆက်လက်ကူးစက် ဖြစ်ပွားခွင့်ပြုခဲ့သည်။
လာရောက်အကြမ်းဖက်သူများသည် နယ်ခံများမဟုတ်ကြပဲ မျက်နှာစိမ်းများဟု ဒေသခံများက ခိုင်လုံစွာပြောခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ မိတ္ထီလာ ၀န်းကျင် တွင် တပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးဌာန ၈ ခုရှိပြီး စစ်သားသစ် သင်တန်း ၅ ခုတောင်ရှိနေခဲ့သည်။
၄င်းတို့ဌာနများနှင့် တပ်သားသစ်များအား ညအချိန် ခရာမှုတ်ကာ လူစုပြီး ကုမ္မဏီများပိုင်သော မြေသယ်ကားကြီးများဖြင့် ခေါ်ဆောင်လာပြီး အလျှင်မြန်ဖျက်ဆီးစေသော သတင်းမှာ အပြင်သို့ ပေါက်ထွက် ရောက်ရှိလာခြင်း မရှိသေးကြောင်း တင်ပြရင်း အကြမ်းဖက်အထိရုဏ်း လက်သည် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ ဆောင်းပါးအား အသေခြာ ဖတ်ရှု ပါက ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း ……………………….
မှတ်ချက် ( မည်သည့် ဘာသာရေးဘက်မှ မိမိအနေဖြင့် လိုက်ကာ တင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိရရှိခဲ့သော သတင်းအချက်လက် မှတ်တမ်းများ နှင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဘက်မလိုက်ပဲ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူများ၏ အကူညီများဖြင့် တိကျစွာ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်)စာဖတ်သူအပေါင်း စစ်ဘီလူးများ ဖန်တီးလှည့်ပြားသော ဘေးအန္တရယ် လှည့်ကွက် အသွယ်သွယ်မှ ကင်းဝေနိုင်ကြပါစေ။